को हुन् अष्ट्रेलियाको नदीमा डुबेर मृत्यु हुने दुई युवाहरु ?
सिड्नी । सिड्नीमा रहेको एक नदीमा डुबेर दुई जना युवा नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्यु हुनेमा विशाल सेढाई र रोशन छत्कुली छन् । उनीहरु क्रमशः २६ र २३ वर्ष उमेरका थिए । सेढाई पेशाले ईन्जिनियर हुन् ।
अष्ट्रेलियाको पढाई सकाएर एक वर्षदेखि उनी आफ्नो पेशामा कार्यरत थिए । यसबारे थप अनुसन्धान भइराखेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
किन हुन्छ अष्ट्रेलियामा बारम्बार यस्तो घटना ?
सुरक्षाका लागि पौडी खेल्न जानुअघि यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दिन भनिएको छ ।
सधैं रातो र पहेंलो झण्डाको बीचमा मात्र पौडनुहोला ।
समुद्री तटको किनारामा राखिएका सूचना र चिन्हका बारेमा राम्ररी पढेर र बुझेर मात्र पानीमा पस्नुहोला ।
पानीमा पस्नु भन्दा अघि लाइफगार्ड र लाइफ सेभरहरुसँग सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक परामर्श लिनुहोला ।
साथीसँग मात्र पौडी खेल्नुहोला । पानीमा एक्लै पस्नु वा पौडनु भन्दा साथी लिएर मात्र पौडिनु बुद्धिमानी मानिन्छ । अझ बालबालिकाहरुलाई त एक्लै कहिल्यै पानीमा पस्न नदिनुहोला ।
केही गरि पानीमा डुबिहाले नआत्तिनुहोला । बरु टाउको भन्दा माथि हात उठाएर लाइफगार्ड वा अरु व्यक्तिको ध्यान तान्ने कोशिस गर्नुहोला ।
मद्यपान वा कुनै औषधि सेवन गर्नुभएको छ भने पानीमा पस्दै नपस्नुहोला ।
पौडिन पानीमा पस्दा सन ग्लास अनिवार्य लगाउनुहोला । साथै पानी निल्नबाट जोगिनुहोला ।
लोकल मौसम पूर्वानुमान शाखाले गरेको मौसमको भविष्यवाणीलाई अवश्य मान्नुहोला ।
यदि कुनै व्यक्ति डुबिरहेको देख्नुभयो र तपाई सहयोग गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने ट्रिपर जेरो नम्बरमा इमर्जेन्सी खबर गरिदिनुहोला ।